China DIP-Assembly orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | kaz
Ny fonosana roa in-line dia antsoina koa hoe fonosana DIP, DIP na DIL raha fintinina. Izy io dia fomba fonosana mihodina. Ny endrik'ilay boribory mitambatra dia mahitsizoro, ary misy andalana roa ny tsimatra vy mifanila amin'ny andaniny roa, antsoina hoe fanjaitra andalana. Ireo singa ao amin'ny fonosana DIP dia azo soloina ao anaty lavaka vita amin'ny plastika vita amin'ny pirinty vita amin'ny pirinty na ampidirina ao amin'ny faladiany DIP.
Ny felika miharo dia matetika mampiasa fonosana DIP, ary ny faritra fonosana DIP ampiasaina matetika dia misy switch DIP, LED, fampisehoana fito-segment, fampisehoana strip ary fampitana. Ny mpampifandray fonosana DIP dia matetika ampiasaina amin'ny tariby misy solosaina sy fitaovana elektronika hafa.
Ny singa fonosana DIP dia azo apetaka amin'ny takelaka boribory amin'ny alàlan'ny teknolojia plug-in plug-in, na azo apetaka amin'ny alàlan'ny faladiany DIP. Ny fampiasana ny faladia DIP dia afaka manamora ny fanoloana ny singa ary misoroka ny hafanana be loatra amin'ny singa mandritra ny fametahana. Amin'ny ankapobeny, ny sockets dia ampiasaina amin'ny boriborintany mifangaro miaraka amin'ny volavola lehibe kokoa na ny vidin'ny singa ambony. Toy ny fitaovam-panadinana na ny mpandoro, izay matetika ilaina ny mametraka sy manaisotra ny boriborintany mifangaro, dia misy socket fanoherana aotra. Ny singa fonosana DIP dia azo ampiasaina amin'ny takelaka misy mofo ihany, izay matetika ampiasaina amin'ny fampianarana, famolavolana famolavolana na famolavolana singa.
Previous: Coating mifanaraka